Izixazululo Zekhandlela | Ukulinganisa kwenkampani Winby Industry&trade Limited
Izicelo zokusebenzisa ikhandlela elinephunga elimnandi
Amakhandlela anephunga elimnandi abe yindlela yokulungisa ukunambitheka kokuphila, kungakhathaliseki ukuthi ufunda incwadi ngokuthula, noma kancane kancane unambitha inkomishi yetiye, noma lapho ucwiliswa okugeza okunethezekile okushisayo, khanyisa ikhandlela elinephunga elimnandi futhi uhogele Iphunga elimnandi, zonke izinkinga zizokhohlakala, futhi wonke umuntu ukhululekile futhi usesimweni esihle.
Ikhandlela lomshado---Iphunga lingaletha umuzwa ophezulu wenjabulo
Ulwandle olunephunga elimnandi lushisa kakhulu ehlobo. Iphunga elimnandi lewolintshi, izimbali ne-vanilla kuhlangana kahle, kungikhumbuza i-Bali, umoya oshisayo wasolwandle nokukhanya kwelanga. Ukukhanyisa okunjaloAmakhandlela esitayela saseYankee njenge ikhandlela lomshado emshadweni ngeke nje kukulethele ezothando, kodwa futhi kukwenze ugcwele injabulo yesikhathi esizayo. Vumela iphunga lengeze ukuthinta kwezinkumbulo ezimnandi emshadweni. Thatha leli khandlela njengesikhumbuzo, futhi izivakashi ezithola isipho zizobuzwa ubumnandi.
Ikhandlela lokuhlobisa ikhaya---Ikhandlela lengilazi elinephunga lebhisikidi
Ikhaya, njengendawo ende kakhulu yokuhlala, vele kufanele ibe yinhle futhi ifudumale. Indlela elula nephumelelayo yokwenza ikhaya lakho libe lihlei-aromatherapy ikhandlela, njengokuthi a ingilazi ikhandlela elinephunga elimnandi. Lamakhandlela wonke asetshenziswa nawo isoya wax phakathi izimbiza zekhandlela lengilazi, khetha uthanda iphunga. Ibhisikidi nomaamakhandlela e-lavender iphunga eliqabulayo kakhulu, alimnandi neze. Ifanele kakhulu ngezimpelasonto ezifudumele zasebusika, ezihlala ekhaya, zimbozwe ngengubo, zifunde umbhalo omncane omnandi, zilala ngephunga elifudumele. Ngemuva kokukhanyisa, igumbi ligcwele iphunga elimnandi, elenza uzizwe ukhululekile futhi ufudumele.
Chofoza--A08M A07M A08M
I-Yoga kanye nekhandlela lokubhucunga---Amakhandlela akhululekile
I-Yoga igxile kakhulu emkhathini wemvelo, ngakho-ke ungakwazi ukukhanyisa a amakhandlela anephunga elimnandi ngesikhathi se-yoga. Lapho uqhuba i-yoga uwedwa, kodwa akusho ukuthi ungazijwayeza uwedwa futhi unesizungu. Ungasebenzisa futhiithini amakhandlela ukwenza i-yoga yothando. Amakhandlela ephunga ulethe umoya wothando kumkhuba wakho we-yoga. Ingase futhi isetshenziselwe massage.Ikhandlela lokubhucunga, esetshenziswa ngokwemvelo massage wax noma 100% i-wax ye-soy yemvelo, ayikwazi nje ukufeza umphumela wokuphumula umzimba nengqondo, kodwa futhi ihlobise isikhumba, ikuvumela ukuba ujabulele ngokugcwele ukunambitheka okuyingqayizivele kokuphila.
Chofoza---A06M I-D25P L01H
Ikhandlela elinephunga lehhotela kanye ne-Reed Diffuser
Ukuqeda iphunga elingavamile lendlu yokugezela nge amakhandlela anephunga elimnandi, kungcono ukhethe iphunga elisha neliqabulayo. Mayelana ne-isitsha sekhandlela, ungakhetha ithini imbiza noma ingilazi imbiza yekhandlela. Iphunga lochungechunge lwezithelo noma ezisawolintshi linomthelela omuhle ekususeni iphunga elingavamile. Ungakwazi futhi ukukhanyisa ikhandlela elinephunga elimnandi ngesikhathi sokugeza ukuze uthobe ukunambitheka kothando futhi wenze ukugeza kube ukuphulukisa ngokomoya.
I-Reed diffuser ingakhipha iphunga ngokwayo, okuyinto enhle kakhulu eqabulayo, yothando eyakha umoya futhi isungule umuzwa. Konke lokhu kubonakala kuhloniphekile, kunhle, futhi kuhlukile.
Chofoza----A03P XP01 H12
Amakhandlela anephunga lengilazi ye-DIY---ukwenza amakhandlela uwedwa
Ungamnika kanjani isipho esikhethekile ngosuku olukhethekile? Iphunga elenziwe ekhayaingilazi amakhandlela ngesivalo kuyisinqumo sakho esingcono kakhulu. Sinikezela ngazo zonke izinto zokwakhaukwenza amakhandlela anephunga elimnandi. I-Soy wax, amafutha ephunga, isitsha sekhandlela, imbiza yekhandlela enesembozo (isitsha sengilazi ye-matte noma isitsha sengilazi esiqandisiwe), izibani zekhandlela, wizitika ze-ick, idivayisi ye-wick centering, ibhodwe, udayi wekhandlela. Zizwe ukhululekile ukukhetha oyithandayo iphunga, njenge rose, lavender, umango, sitrobheli nokunye. Wonke amakha anencazelo ekhethekile. Nikeza ikhandlela elinephunga elimnandi elenziwe nguwe njengesipho kwabanye, elifanekisela isibusiso sakho osithanda kakhulu.
Chofoza-----KA06M A09T iwikhi yekhandlela isoya wax amathuluzi ekhandlela idivayisi yokubeka phakathi nendawo